Iibso Daaweynta kuleylka infrared Arthritis Jilib Taageerada Jilibka - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Fiirsiga Kuleylka Xilliga Fudud ee kuleylka Qalfoofka Qalfoofka
$ 53.99 qiimaha joogtada ah $ 97.99
maraakiibta From United States Russian Federation Shiinaha
Color Plug EU 2pc USB Cable 1pc US koronto 2pc US koronto 1pc Plug EU 1pc USB Cable 2pc
Mareykanka / EU Plug 2pc Ruushka / Midowga Yurub Plug 2pc Shiinaha / USB Cable 1pc Xiriirka Ruushka / US Plug 2pc Mareykanka / USB Cable 1pc Shiinaha / EU Plug 2pc Xiriirka Ruushka / USB Cable 1pc Xiriirka Ruushka / US Plug 1pc Ruushka / Midowga Yurub Plug 1pc Shiinaha / USB Cable 2pc Shiinaha / EU Plug 1pc Mareykanka / EU Plug 1pc Shiinaha / US Plug 1pc Shiinaha / US Plug 2pc Mareykanka / US Plug 1pc Mareykanka / US Plug 2pc Mareykanka / USB Cable 2pc Xiriirka Ruushka / USB Cable 2pc
Daaweynta kuleylka kuleylka ee infakshanka Arthritis Jilibka Taageerada Brace - Mareykanka / EU Plug 2pc gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Saameyn: Daryeelka Lafaha
Number Model: 10237US
Name: Buundada Taageerada Arthritis
feature: Joojisida Xanuunka Xanuun Jilibka ah
Ujrada: Iyadoo USB Cable
Hababka: 3 Qalabka kuleylka adiga
Muuqaalka: Knee Xanuun, suuf kululaynta jilibka, Jaran jilibka ah oo jaban, xanuun joojiyaha jilibka, taageerada jilibka jilibka, kuleylka kuleylka
Qalabka: Qalabka Neefsiga Neoprene
3-kuleylka-kuleylka: casaanka-ugu sarreeya, caddaan-dhexe, buluug-ugu hooseeya
Cabbirka: 59 * 21.8 cm
Fadlan muddo dheer riix wareegga si aad u bilowdo awood.
Alaabtaani waxay u shaqeyn doontaa sida caadiga ah marka fiilada la xiro, iyo nalka guduudan, nalka cad, nalka buluuga ah wuxuu dhacayaa wixii ka dambeeya 0.5 ilbiriqsi isagoon riixeynin badhanka.
Alaabkani si buuxda ayuu u kululaadaa markii nalka u rogo casaan xagga naqshadda neefsashada (had iyo jeer ma dhalaalayo, waxaa loo muujiyaa inuu yahay ruxmo).
Alaabtan ayaa si otomaatig ah loogu wareejinayaa kuleylka 70% hadaadan riixmin badhanka, nalkana wuxuu isu rogayaa caddaan 5 daqiiqo kadib.
Mar haddii aad riixdid batoonka, waxaa loo wareejin doonaa 45% kuleyl, nalka nalka ahna buluug.
Alaabtan ayaa shaqeyn doonta kadib muddo dheer riix badhanka 1.5 sekan.
Laydhka Wax Soo Saarka USB: 5V / DC
Qalabka koowaad (Iftiinka Cas), heerkulku waa 44 Celsius.
Qalabka labaad (Iftiinka cad), heerkulku waa 41 Celsius.
Qalabka saddexaad (Iftiinka Buluugga), heerkulku waa 38 Celsius.
Korantada Wareega Korantada Mareykanka: 7.9V / DC
Qalabka koowaad (Iftiinka Cas), heerkulku waa qiyaastii 56-65 Celsius.
Qalabka labaad (Iftiinka cad), heerkulku waa qiyaastii 46-55 Celsius.
Qalabka saddexaad (Iftiinka buluugga ah), heerkulku waa 40-45 Celsius.
Работает, очень надеюсь на результат Xulka wararka oo dhan
Gaarsiinta degdegga ah ayaa la helay kadib 3 maalmood tan iyo markii aan dalbaday waana mid si weyn u shaqeyneysa
Envío súper rápido, igual a la descriptionpción calor coradable no quema mantiene bien la feverura
Helay labada shay maanta iyo waxa loo sharxay. Waxay cusbooneysiin doontaa caafimaadka jilbaha jilbaha